लामिछाने पिएसएल ड्राफ्टको सर्वाधिक महँगो क्याटेगोरीमा - DURBAR TIMES
HomeSportsलामिछाने पिएसएल ड्राफ्टको सर्वाधिक महँगो क्याटेगोरीमा
लामिछाने पिएसएल ड्राफ्टको सर्वाधिक महँगो क्याटेगोरीमा
एजेन्सी | नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) को ड्राफ्टमा परेका छन् । सन्दीप पिएसएलको सर्वाधिक उच्च मूल्यको क्याटगेरी प्लेटिनममा परेका हुन् ।
सन्दीप, अफगानिस्तानका स्पिनर राशिद खान, वेस्टइन्डिजका आक्रामक ब्याट्समयान क्रिस गेल लगायत २५ खेलाडी प्लेटिनम क्याटेगोरीमा परेका छन् । जुन पिएसएल ड्राफ्टमा सर्वाधिक बढी मूल्य पर्ने क्याटेगोरी हो । उक्त क्याटेगोरीमा अनुवन्ध हुने खेलाडीले १ लाख ४० हजार देखि २ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने छन् । यस क्याटेगोरीबाट एक फ्रेन्चाइज टोलीले एक खेलाडीमात्र अनुबन्ध गर्न पाउछ ।
सन्दीपले लेन्डन सिमन्स, कार्लोस ब्रेथवेट, किस गेल, डेविड मलान, राशिद खान, मुजिब उर रहमान लगायतका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । गतवर्ष सन्दीपलाई यसै क्याटेगोरीमा कुनैपनि टोलीले अनुबन्ध गरेका थिएन । पिएसएलको ड्राफ्ट आगमी जनवरी १० मा लाहोरमा हुने छ ।
सन् २०१८ मा सन्दीपलाई लाहोर कलन्दर्सले खरिद गरेको थियो । गोल्ड क्याटागोरीमामा लाहोरमा सन्दीप अनुबन्ध भएका थिए । सन्दीपले ७ खेलमा ११ विकेट लिएका थिए । केटा ग्याडियर्टस, लाहोर कलन्दर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामबाद युनाइटेड, पेशवार जाल्मी र कराँची किङ्स गरि ६ फ्रेन्चाइज टोली छन् ।
पिएसएलको ड्राफ्टमा खेलाडीलाई ५ क्याटगेरीमा राख्ने गरिन्छ । प्लेटिनम सर्वाधिक महँगो क्याटेगेरी हो । डाइमन्ड क्याटगेरीमा अनुबन्ध हुने खेलाडीले ७० देखि ८५ हजार अमेरिकी डलर पाउने गर्दछन् ।
गोल्ड क्याटेगोरीमा अनुबन्ध हुनेले ५० देखि ६० हजार अमेरिकी डलरमा बिक्छन् । सिल्भरमा अनुबन्ध हुनेले २२ देखि ३३ हजार अमेरिकी तथा इमर्जिङमा पर्नेले १० देखि १२ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने गर्दछन् ।
Previous articleथप ५२२ जनामा कोरोना संक्रमण
Next articleट्राफिक जरिवाना डिजिटल वालेटबाटै, यसरी गर्नुहोस् भुक्तानी
लाहोर क्वालन्डर्सले रिलिज गर्यो सन्दीपलाई
सन्दीपद्वारा कोरोनाविरुद्ध लड्न ‘टिम सन्दिप लामिछाने’ अभियानको घोषणा गर्दै ३ लाख सहयोग
आईपीएल २०२१ को अक्सन आज,सन्दीपकाे सम्भावना कस्ताे ?
आईपीएलको अक्सनमा नेपालबाट सन्दीप छानिए,कति छ बेस प्राइस?
आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सबाट बाहिर सन्दीप,यो टिममा जाने सम्भावना उच्च
बिबिएल : सन्दीप लामिछानेले भोलि मैदानमा उत्रिने